Home Wararka Dagaal dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al Shabaab, deegano laga qabsaday Al Shabaab
Dagaal dhexmaray ciidamada Puntland iyo Al Shabaab, deegano laga qabsaday Al Shabaab
Sida ay sheegteen Ciidanka PMPF ee Dowlad Goboleedka Puntland, saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorsheysan oo ka dhan ah Al-shabaab ka fuliyay deegaano buuraley ah oo ka tirsan Gobolka Bari ee Maamulkaas. Ciidamada PMPF ayaa howlgalka sigaar ah uga fuliyay dhulka buuralayda Cal-miskaad gaar ahaan halka loo yaqaano buurta Barida oo la sheegay inay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-shabaab.
Sida lagu xusay qoraal kasoo baxay Taliska Ciidanka PMPF ee Puntland ayaa lagu sheegay inay howlgalka kula wareegeen Saldhig Shabaabka ku lahaayeen buuralayda Cal-miskaad, in kastoo aysan shaacin inuu dagaal ama weerar ka dhacay halkaas.
Sidoo kale Saraakiisha Puntland ayaa tilmaamay inay qabsadeen saanad hub ah, walxaha Qarxa, aaladaha lagu farsameeyo Qaraxyada iyo Tuutayaal oo ku yaallay Saldhiga ay la wareegeen. Si kastaba Ciidanka PMPF ee dowlad Goboleedka Puntland ayaa horey sidaan oo kale howlgalo qorsheysan uga fuliyay deegaano ka tirsan dhulka buuralayda ee Gobolka Bari, iyagoona ku dilay xubno ka tirsan Al-shabaab iyo Daacish.